Sirdoon & Askar badan oo caawa lasoo dhigay Jidadka Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Cabsi iyo dhaq-dhaqaaq ciidan ayaa Caawa laga dareemayaa Caasimadda, kadib hanjabaadii uu Cumar Filish u diray Midowga musharaxiinta.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidammo badan iyo Saraakiil ka tirsan Nabad Sugidda ayaa caawa lasoo dhigay jidadka Muqdisho, sida Keydmedia Online ay ogaatay.
Ila-wareedyo kala duwan oo ay Keydmedia Online ka heleyso Sirdoonka iyo Booliska Soomaaliya ayaa sheegaya in amniga Magaaladda Muqdisho aad loo adkeeyay caawa, waxaana Caasimadda laga dareemayaa caawa dhaq-dhaqaaq ciidan.
Boqolaal Askar iyo Saraakiil dhar cad oo ka tirsan Sirdoonka ayaa dariiqyadda iyo Isgoysyadda muhiimka ah la soo dhigay. Sidoo kale, waxaa la adkeeyay Amniga duuleedka Villa Somalia.
Arintaan ayaa imaaneysa kadib hanjabaadi duqa Muqdisho Cumar Filish oo uu u jeediyay Musharixiinta Mucaaradka, asigoo yiri la dili doono hadii ay isku dayaan inay qalalaase amni ka abuuraan magaaladda, isagoo difaacaya Farmaajo.
Keydmedia Online ayaa ogaatey in Farmaajo uu ku amray Cumar Filish inuu abaabulo dibadbaxyo ka dhan ah Musharixiinta Mucaaradka, kadib markii ay Maanta soo saareen war-murtiyeed ay ku sheegeen inay qaban doonaan doorasho, hadii aan la bedelin gudiyadda doorashooyinka aan dhex dhexaadka ahayn.
Wixii Faah-Faahin ah kala soco Keydmedia Online